Imbali yelogo ye-Kia: imbali yayo kunye neempawu eziqhelekileyo zophawu | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | | Ezahlukeneyo
Umthombo: Iimoto zeMega
Ihlabathi leemoto liye laba yintsholongwane ngakumbi kule minyaka idlulileyo, kwaye ngakumbi ngokuvela kwetekhnoloji. Kukho iibrendi ezininzi ezizinikele kweli candelo eliye lafunwa ngabasebenzisi abaninzi iminyaka.
Kwaye akulindelekanga ukuba ayikabhengezwa njengenye yamacandelo akhula ngokukhawuleza kwimarike. Kuba ngamnye wethu unesithuthi esisinceda ukuba sijikeleze kwaye senze uhambo lwethu olude lube lula.
Kule posi, sikubonisa imbali yeKia, enye yezona ntlobo zemoto zibalaseleyo kwicandelo. Ukuba unomdla kwindlela eli shishini likhule ngayo kule minyaka idlulileyo kunye nokuba ibiyintoni isiqalo salo, awunakuphoswa koku kulandelayo.
1 Yintoni i-KIA
1.1 Ibali likaKia
1.1.2 1951 - 1960
1.1.3 1961 - 1970
1.1.4 1971 - 1980
1.1.5 1981 - 1990
1.1.6 1991 - 2000
2 Ukuvela kwelogo yeKia
2.1 Ukubiza igama
2.2 uphawu lokuqala
2.3 iguqulwe q
2.7 Injani ilogo yangoku ye Kia
3 Indawo kaKia
Kia luphawu lwemoto olwaqalwa kwaye lwasekwa kwisixeko saseKorea. Yasekwa ngo-1944 kwaye kule minyaka, iye yathatha inxaxheba kuphuhliso lwezinye izithuthi ezisebenza ngabantu ezifana neebhayisekile kunye nezinye izithuthi, ezifana nezithuthuthu. Okwangoku, eli shishini liye laba kwaye lidweliswe njengesihlanu esikhulu somvelisi weemoto kwihlabathi.
Yintoni ebonakalisa olu phawu kakhulu kukubaluleka kwayo kwemveliso ephezulu, kuba ifikelela kwinani le-1,5 yezigidi zezithuthi, ezisasazwa kumazwe angama-9 kunye neefektri. Le nkampani ikwashiya nto ifunekayo, njengoko ngoku inabasebenzi abangama-15.000 bebonke abasebenza usuku nosuku ukugcina uKia emarikeni.
Ngenxa yako konke oku kungasentla, I-Kia ifikelele kumazwe afana neSpain ngenjongo yokwandisa intengiso yayo kunye nokomeleza isikhundla sayo kwimarike yeemoto. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezona zinto zibalulekileyo kubenzi beemoto.
Ukuqala imbali yeli shishini, kufuneka sijonge ngasemva kwaye sizikhokele kwakhona kwixesha elidlulileyo, ngakumbi kunyaka ka-1944. inkampani ebizwa ngokuba yiKyongseong Precision yasekwa, ishishini elizinikele ekwenzeni iibhayisekile kwisixeko saseSeoul. Kwiminyaka kamva le nkampani yabizwa ngokuba yiKia kwaye yaba litsheyini lokuqala ukwenza iimoto eKorea.
Kule minyaka, inkampani iqala into eya kuba yinkqubo yebhayisikile yokuqala yaseKorea. Le bhayisekile yayibizwa ngokuba yiSamchonriho kwaye yasekwa ngo-1952. Kwiminyaka kamva, inkampani yabizwa ngokuba yiKia Industry Co Ltd.
Emva kokwenziwa kwebhayisekile yokuqala, kufika iiveni zokuqala. Ngenxa yesi sizathu, ilori yokuqala efumana igama le-K-360 yenzelwe. ezinye uyilo ezifana T-1500, T-2000 okanye T-6000 wajoyina. Zaziyilwe zinamavili amathathu ukwenza lula ukuphatha kwaye zinezihlalo ezibini.
Le minyaka ilishumi ngokungathandabuzekiyo yayiyeyona ilungileyo kwaKia. Kule minyaka imoto yokuqala iyilwe kwaye yenziwe. Emva kokudalwa okulandelayo kweveni yokuqala, ishishini ngokwalo laqalisa iprojekthi apho injini yepetroli yasungulwa njengeyona mafutha aphambili ezithuthi. Le projekthi yaphawula ukuqala kunye nokuzalwa kweemoto zokuqala (iBrisa Pick-Up B-1000). Kwiminyaka kamva iKia yenza iprojekthi yezinye iibrendi ezifana nePeugeot kunye neFiat.
Ngokufika kweminyaka yee-80, into esiyaziyo namhlanje njengokuba uBongo wazalwa, iveni eyahlukileyo kwezo ziyilelwe ukuza kuthi ga ngoku, kuba inezihlalo ezilithoba. Emva kokusayina isivumelwano kunye nenkampani yakwaFord, iKia ivumela ubunewunewu bokuyila iimoto zokuqala zabakhweli. Ezi moto zabakhweli zaziwa ngokuba yiConcord.
Emva kweminyaka eliqela yokuzalwa, i-Hyundai-Kia Automotive yazalwa, kunye nayo izithuthi ezifana neRocsta, Sephia, Avella, Elan, Suma kunye ne-Enterprise nazo zazalwa. Ngowe-1988, eli shishini liyaqhubeka ukuphuhlisa phantsi kwegama Kia Motor.
Ukuphelisa le minyaka ilishumi yempumelelo, ngo-2001 I-Kia idlula ngenani lezigidi ezilishumi, iiyunithi ezenziweyo. Le minyaka ukuza kuthi ga ngoku, ivumele i-brand ukuba iqhubeke nokuphuhlisa kunye nokukhula kwishishini. Ukongeza, ifikelele kwinani eliphezulu lamazwe, okwangoku abathengi abaninzi ababheja kule nkampani.
Ekugqibeleni, i-Kia yinkampani egcine unyawo lomntu iminyaka. Kangangokuba akumangalisi ukufumana isithuthi kule nkampani kwisixeko sethu okanye kwindawo esingqongileyo.
Ukuvela kwelogo yeKia
Emva kokugqabaza ngokufutshane ngembali yayo, siza kuqhubeka nokuphawula kwinkampani njengesazisi senkampani. Ngenxa yesi sizathu, senze uhlalutyo oluncinci loyilo kunye nohlengahlengiso lwayo.
Igama likaKia liguqulela ekuzalweni kweAsia. Ukuthiywa kwayo kuphuma kuthotho lweenkqubo ezaqaliswa eKorea kwaye oko kuphawulwe ngaphambili nasemva kolu shishino.
Ilogo yokuqala yenzelwe ukwenziwa kwebhayisekile yokuqala yaseKorea. Kungenxa yoko le nto i-logo ayigcini iimpawu zokuba luyilo lwemoto yezemidlalo okanye ukhenketho, kodwa kuyilo olutsha lwelo xesha. Kulo yilo, imibala ye-monochrome isetyenziswe.
Le logo ilandelayo iphawulwe ngokuqulatha uhlobo oluluhlaza olujikwe Q. Intsingiselo yale logo ayikho enye into ngaphandle kokuhlaziywa kwelayisensi yophawu. Eli phepha-mvume alitshintshanga kuphela umfanekiso wenkampani, kodwa kunye nemveliso abayithengisayo, ekubeni basuka ekuthengiseni iibhayisekile ukuya kwiimoto zokuqala.
Kwi-80s, i-brand yenziwe ngesitayela ukwenza i-logo yenkampani kunye nexesha. I-logo yayiyilwe ngombhalo obhalwe ngqindilili.
Kwiminyaka eyi-10 kamva, kwakuyimfuneko ukwenza uhlengahlengiso, ngale ndlela uphawu lwabonakaliswa ngendlela yokuba uphawu lwenziwe ngohlobo lwe-oval ebekwe ngokuthe tye. Ubomvu kunye nomhlophe baba yinxalenye yemibala ephambili yenkampani ye-brand.
Kwi-2002, idizayini igcina iimpawu ezifanayo zelogo yangaphambili, kodwa umgca wegraphic ucacile kwaye ucacile. Uyilo luncinci kwaye lunzulu, eqhelekileyo yexesha.
Injani ilogo yangoku ye Kia
Ngo-2022, u-Kia uye waziva isidingo sokuyila ngokutsha isazisi sophawu. Uyilo oluthe kratya lwetekhnoloji nolwezemidlalo, olubonisa ngokungathandabuzekiyo ezinye zeentsingiselo kunye neenkcazo zexesha esizifumana sikulo.
Uphawu olutsha lusuka kude kuyilo olucwangcisiweyo nolufundekayo, kwaye luthatyathelwa indawo luyilo olunekamva eliqaqambileyo apho luhlala khona iimpawu zexesha elitsha esiphila kulo nalapho lubhenela kumyalezo wayo yonke into ezayo. Ukongeza, emva kokudalwa kwelogo entsha, ezinye iziyilo nazo zithathelwe ingqalelo, njengokwenziwa kwezithuthi zombane ezintsha.
Malunga neminyaka emibini edlulileyo, uKia wasungula intengiso eyayiboniswa kuzo zonke iinethiwekhi zikamabonakude. Yayingeyondawo nje, kuba yayifihla umyalezo emva kwayo. Indawo yayibonakaliswe kakhulu ngokubalisa ibali lomdlali uJosh Jacobs, Umdlali owathi, buqu, wamiselwa ukusuka emncinci kakhulu ukuba aphile ngaphandle kwekhaya eMelika. Ngokuqinisekileyo uya kuzibuza ukuba le ndawo ifihla ntoni ebambe ingqalelo yombukeli kakhulu, ke siya kukuxelela.
Emva kokubhengezwa komdlalo wokugqibela we-NFL, u-Kia akazange abonakale kwaye wajoyina ukuba yinxalenye yolu khuthazo. Kule nto, kwaye njengoko sesichazile ngaphambili, basebenzisa umzobo womdlali uJosh Jacobs. Indawo ithatha malunga nemizuzwana engama-70 kwaye ichaza ibali lomdlali apho abuyela khona ebuntwaneni bakhe ngenjongo yokuthetha yedwa kunye nokucebisa bobabini kunye nombukeli ombonayo kwaye amphulaphule. Ukwenza oku, uthi kuye: "Kufuneka ukholelwe kuwe, woyise ukubandezeleka okukungqongileyo kwaye loo ntsimi yindawo yakho yovavanyo. Zama ukuba ngumntu kwaye ndiyakuthembisa ukuba ngenye imini uya kuba ngumntu.
Umdlali, owaphoqeleka ukuba aphile ezitratweni iminyaka, ubonisa ibali elibhenela ukungalingani kwezoqoqosho kunye nentlupheko ukuba iintsapho ezininzi zihlala eMelika. Ngaphandle kwamathandabuzo, le ndawo iye yaba yenye yeemvakalelo, kwaye uphawu ngokwalo lube negalelo ekuvezeni indlela ekubaluleke ngayo ukufumana uncedo ngamaxesha entlupheko.
Ukongeza, ngexesha lokufowuna kwendawo, iphulo kunye nomdlali wanikela nge-1000 yeedola eziye zanceda.
I-Kia ifakwe kwikhathalogu ukuza kuthi ga ngoku njengenye yeempawu zemoto ngokugqwesileyo kwimarike. Kangangokuba, njengoko siye sakwazi ukuqinisekisa, igcina imbali eyibonakalisayo. Ukongeza, akulindelekanga, kuba ukukhula kwayo kuye kwavumela ukuba kubekho iifektri ezininzi ezisasazwa kumazwe ahlukeneyo kwihlabathi jikelele.
Ngesi sizathu, siyathemba ukuba ufunde okuninzi malunga nolu phawu ukuba kude kube ngoku, besingazi ukuba kutheni kwaye njani. Ngoku ixesha lifikile lokuba uqhubeke nokukhangela ulwazi kwaye ufunde ngakumbi ngalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Imbali yelogo yakwa Kia
Indlela yokwenza imizobo kwi-Procreate step by step?